Umsizi we-Graphite, i-Graphite Rod, i-Graphite Furnace Lining - Hexi
Sisekela ifilosofi yebhizinisi lobuchwepheshe obuholayo, ikhwalithi yokuqala nekhasimende kuqala.
Ikhwalithi Yomkhiqizo Ovelele
I-Hebei Hexi Carbon Co., Ltd.yibhizinisi elikhulu lokuma okukodwa elikhiqiza ama-electrode e-graphite. Ikheli lalo lehhovisi liseHandan, idolobha likazwelonke lomlando namasiko esifundazweni saseHebei, eChina. Imboni yayo itholakala elokishini laseChangxiang, eCheng 'an County, Handan City, esifundazweni saseHebei, eChina. Ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-415,000 futhi inabasebenzi abangama-280.
Zakamuva Ezivela Ezindabeni Zebhulogi
Kukhona Igebe Ku-Electrode Ye-graphite ...